စဉ်းစားခြင်းနှင့်မာတိကာ၏ Destiny အော်ဒီယိုစာအုပ်များစားပွဲတင် - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
စဉ်းစားခြင်းနှင့်မာတိကာ၏ Destiny အော်ဒီယိုစာအုပ်များဇယား
စဉ်းစားခြင်းနှင့် Destiny အော်ဒီယိုစာအုပ်များ
အခန်းကြီး2အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဠာ၏အစီအစဉ်
02.01 ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဠာထဲမှာအစီအစဉ်ရှိပါသည်။ အတွေး၏တရား။ ဘာသာတရား။ စိတ်ဝိညာဉ်။ စိတ်ဝိညာဉ်၏ကံကြမ္မာကိုရည်သီအိုရီ။
အဆိုပါ Soul 02.02 ။
စကြဝဠာတစ်ဦးစနစ်၏ 02.03 ကောက်ကြောင်း။ အချိန်။ Space ကို။ ရှုထောင့်။
မြေကြီးတပြင်နယ်ပယ်နှင့်စပ်လျဉ်း 02.04 Plan ကို။
AIA ၏ပြည်နယ်တစ်ခုအသက်ရှူ-form ကိုယူနစ်များ၏ 02.05 ေူပာင်းလဲရေး။ တိုးတက်မှု၏ထာဝရအမိန့်။ ကမ္ဘာ၏အစိုးရ။ အဆိုပါ "လူသား၏ကျဆုံးခြင်း။ " ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပွနျလညျ။ ဥာဏ်-ခြမ်းမှသဘောသဘာဝ-side ကနေယူနစ်၏ကျမ်းပိုဒ်။
အတွေးအခေါ်၏ပညတျတရားအခန်းကြီး3Objective
ဘာသာတရားနှင့်ယာဉ်မတော်တဆမှုအတွက်အတွေး၏ 03.01 အဆိုပါဥပဒေ။
တစ်ခုကမတော်တဆထိခိုက်မှု 03.02 တစ်ဦးအတွေးတစ်ခုပြင်ပဖြစ်ပါတယ်။ မတော်တဆမှုများရည်ရွယ်ချက်။ မတော်တဆမှုများရှင်းလင်းချက်။ သမိုင်း၌မတော်တဆမှု။
03.03 ဘာသာတရား။ တပါးသောဘုရား။ ၎င်းတို့၏တောင်းဆိုမှုများ။ ဘာသာတရား၏လိုအပ်ပါဘူး။ အဆိုပါကငျြ့တရားကျင့်ထုံး။
ဘုရားသခင်၏အမျက်တော် 03.04 ။ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ကံကြမ္မာကို။ တရားမျှတမှုအတွက်ပင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်။
မူရင်းအပြစ်တရား၏ဇာတ်လမ်း 03.05 ။
ဘာသာတရားအတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားကုဒ် 03.06 ။
အတွေးအခေါ်များ၏ဥပဒေအခနျး4စစ်ဆင်ရေး
04.01 အရေးပါ။ ယူနစ်။ တစ်ခုကထောက်လှမ်းရေး။ တစ်ဦးက Triune ကိုယ်ပိုင်။ တစ်ဦးကလူ့ဖြစ်လျက်ရှိ။
04.02 စိတ်။ စဉ်းစား။ တစ်ဦးကအတွေးတစ်ခုဖြစ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်၏လေထု။ ဘယ်လိုအတှေးအနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နေကြသည်။
04.03 သင်တန်းနှင့်အတွေး၏အပြင်ပန်း။ တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်း၏ပင်ကိုစိတ်ကူး။
အတွေးတရားတော် 04.04 ။ ပြင်ပနှင့်အတွင်းပိုင်း။ အကြားအမြင်ရ, စိတ်ပိုင်းနှင့် noetic ရလဒ်များကို။ အတွေး၏တန်ခိုး။ တစ်ဦးအတွေးဟန်ချက်ညီ။ သံသရာ။
တစ်ဦးအတွေး၏ပြင်ပအကြောင်းကိုယူဆောင်နေကြသည်ကိုဘယ်လို 04.05 ။ ပညတ်တရား၏အေးဂျင့်။ မြန်မြန်ထက်ထက်သို့မဟုတ်ကြမ္မာ delay လုပ်ခြင်း။
လူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိ၏ 04.06 တာဝန်။ တာဝန်ယူမှု။ သြတ္တပ္ပစိတ်။ သိန်။
အတွေးတရားတော် 04.07 ။ , ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘိဥာဏ်, စိတ်ပိုင်းနှင့် noetic ကံကြမ္မာကို။
အခန်းကြီး5ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Destiny
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြမ္မာအဖြစ် 05.02 အပြင်ခွအေနမြေား။
05.03 ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးရိုးအလိုက်ကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာသို့မဟုတ်ချူချာအလောင်းများကို။ မတရားတဲ့ညှဉ်းဆဲခြင်း။ တရားမျှတမှုမှားယွင်းမှုများ။ မွေးရာပါ Idiots ။ အသက်တာ၏ span ။ သေမင်း၏ထုံးစံ။
05.04 ငွေ။ ငွေကိုဘုရား။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု။ ပြောင်းပြန်။ အဆိုပါမွေးဖွားသူခိုး။ ဥစ္စာဓနသို့မဟုတ်အမွေဥစ္စာကိုအဘယ်သူမျှမမတော်တဆမှုရှိပါသည်။
05.05 Group မှကြမ္မာ။ ထလော့နှင့်လူမြိုးတစျမြိုး၏ကျဆုံးခြင်း။ သမိုင်း၏ဖြစ်ရပ်မှန်များ။ ပညတ်တရား၏အအေးဂျင့်။ အုပ်စုတစ်စုကြမ္မာအဖြစ်ဘာသာတရား။ အဘယ်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးဘာသာတရားကိုသို့မွေးဘွား၏။
ကမ္ဘာ၏အစိုးရ 05.06 ။ ဘယ်လိုတစ်ဦးချင်း, ရပ်ရွာ, ဒါမှမဟုတ်လူအမျိုးမျိုးတို့၏ကြမ္မာစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းလျက်, နှင့်မည်သို့ကြမ္မာအုပ်ချုပ်သည်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျ 05.07 ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပရမ်းပတာ။ ထောက်လှမ်းရေးဖြစ်ရပ်များ၏အမိန့်အုပ်ချုပ်။
အခန်းကြီး6အကြားအမြင်ရ Destiny
06.01 Form ကိုကံကြမ္မာကို။ တင်းကြပ်စွာအဘိဥာဏ်ကံကြမ္မာကို။ အဘိဥာဏ်ကြမ္မာခြောက်အတန်း။ အဆိုပါ AIA ။ အသက်တော်-ပုံစံ။
06.02 Form ကိုကံကြမ္မာကို။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လွှမ်းမိုးမှု။ အဘိဥာဏ်ကြမ္မာခြောက်အတန်း။
06.03 Form ကိုကံကြမ္မာကို။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်လွှမ်းမိုးမှု။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း။ သန္ဓေသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။
မိဘများ၏ 06.04 ကိုယ်ဝန်ဆောင်လွှမ်းမိုးမှု။ မိခင်၏အတွေးများကို။ ဟောင်းတဦးအတှေးအများ၏အမွေကို။
အသက်တာ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်အနည်းငယ် 06.05 ။ အဘိဥာဏ်အမွေဥစ္စာ။
06.06 Mediumship ။ ပစ္စည်းများ။ Seances ။
06.07 Clairvoyance ။ အကြားအမြင်ရအင်အားကြီးနိုင်ငံ။
06.08 Pranayama ။ အံ့သြစရာ-လုပ်သားများအားဖြင့်အဘိဥာဏ်ဖြစ်ရပ်။
06.10 တုန်ခါမှု။ အရောင်များ။ နက္ခတ်ဗေဒင်။
အဘိဥာဏ်ကြမ္မာအဖြစ် 06.11 ဘာသာတရား။
06.14 အကျင့်, အကောက်ခွန်နှင့်ဖက်ရှင်တွေအဘိဥာဏ်ကြမ္မာဖြစ်ကြသည်။
06.15 လောင်းကစား။ သောက်သုံးရေ။ အရက်၏ဝိညာဉ်ကို။
06.16 မှောငျ, အဆိုးမြင်, ညစ်ခြင်း, ကြောက်ရွံ့ခြင်း, မျှော်လင့်ချက်, joyousness, ယုံကြည်မှု, လွယ်ကူခြင်း, အဘိဥာဏ်ကြမ္မာအဖွစျ။
06.18 အိပ်မက်များ။ အိပ်မက်ဆိုး။ အိပ်မက်အတွက် obsessive ။ အိပ်မောကျ။ အိပ်စက်ခြင်းအတွက်အချိန်။
06.19 စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း။ Somnambulism ။ Hypnosis ။
အသေခံခြင်း၏ဖြစ်စဉ်ကို 06.20 ။ မီးသင်္ဂြိုဟ်။ သေမင်း၏ယခုအချိန်တွင်သတိဖြစ်စေရန်။
အသေခံပြီးနောက် 06.21 ။ သေလွန်သောသူတို့သည်အတူဆက်သွယ်ရေး။ Apparitions ။ အဆိုပါပြုသောယင်း၏ခန္ဓာကိုယ်ကွယ်လွန်သွားပြီသတိဖြစ်လာသည်။
တဦးတည်းကိုမွကွေီးဘဝကနေလာမယ့်အကြောင်း, ပြုသော၏တဆယ်နှစ်လုံးကိုအဆင့်ဆင့် 06.22 ။ အသေခံပြီးနောက်ပြုသောတစ်ဦးပေါင်းစပ်ဘဝစေပါတယ်။ စီရင်တော်မူခြင်း။ ငရဲအလိုဆန္ဒများအားဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ မကောင်းဆိုးဝါး။
06.23 ကောင်းကင်ဘုံသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါသည်။ re-တည်ရှိမှုဆက်ခံပြုသောတစျပိုငျးကို၏။
အခန်းကြီး7စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Destiny
လူ့များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု 07.01 ။
07.02 တစ်ခုကထောက်လှမ်းရေး။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်။ ထောက်လှမ်းရေး၏သုံးခုအမိန့်။ အဆိုပါထောက်လှမ်းရေး၏အလင်း။
07.03 ရီးရဲလ်စဉ်းစားတွေးခေါ်။ Active ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်; passive စဉ်းစားတွေးခေါ်။ အဆိုပါပြုသော၏သုံးစိတ်ထဲတွင်။ အသုံးအနှုန်းများမရှိခြင်းအကြောင်း။ Right-and အကြောင်းပြချက်။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်ခုနစ်စိတ်။ တစ်ဦးကလူ့အတွေးတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိသည်နှင့်စနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအတွေး၏အပြင်ပန်း။
လူ့များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏ 07.05 က Character ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ကိုယ်ကျင့်တရားရှုထောင့်။ အာဏာရအတွေး။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစု။ Sense သည်-အသိပညာနှင့် Self-အသိပညာ။ သြတ္တပ္ပစိတ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု၏ရိုးသားမှုကို။ ရိုးရိုးသားသားစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရလဒ်များ။ မရိုးသားသောစဉ်းစားတွေးခေါ်။ မုသာစဉ်းစား။
07.06 တာဝန်ယူမှုများနှင့်တာဝန်။ Sense သည်-သင်ယူမှုနှင့်အသိ-အသိပညာ။ ကျင့်-သင်ယူမှုနှင့်ပြုသော-အသိပညာ။ ပင်ကိုယ်။
07.07 Genius ။
လူသား၏လေးအတန်း 07.08 ။
တစ်စများ 07.09 Concept ။ အဆိုပါအမြဲတမ်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးသို့မဟုတ်ဘုံအပြီးအပိုင်၏, ထိုလေးခုသတ္တု။ အဆိုပါလေ့လာခြင်း၏စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်။ အဆိုပါပြုသော၏ "ကျဆုံးခြင်း" ။ ပြုသောယောက်ျားနဲ့မိန်းမကိုအလောင်းတွေအတွက် re-တည်ရှိရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
07.10 သမိုင်းမသမိုင်း။ လူ့မွကွေီးပျေါမှာပထမဦးစွာဒုတိယအနေနှင့်တတိယယဉ်ကျေးမှု။ မြေကြီးတပြင်အတွင်းပိုင်းကနေကြွေလွပြုသော။
07.11 တစ်ဦးကစတုတ္ထယဉ်ကျေးမှု။ ပညာရှိတို့သည်။ Rises နှင့်သံသရာ၏ကျရောက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်သံသရာ၏ထ။
လူသား၏အသက်တော်-ပုံစံများမှတဆင့်လာသဘောသဘာဝများ၏ပုံစံများ 07.12 ။ တိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအီဗိုလူးရှင်းရှိပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်ပုံစံများအတွက်အဖွဲ့အစည်းများယောက်ျား၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုချွတ်ချပစ်နေကြသည်။ ပန်းပွင့်အတွက် vermin အတွက်အဖွဲ့အစည်းများ။
သဘာဝတရား၏နိုင်ငံတို့၏ 07.13 သမိုင်း။ အသက်ရှုခြင်းနှင့်မိန့်ခွန်းများကဖန်ဆင်းခြင်း။ နှစ်ခုအမျိုးအစားကိုအောက်မှာစဉ်းစား။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သဘာဝတရား၏နိုင်ငံတို့၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတွင်အဆိုပါထောက်လှမ်းရေး။
07.14 ဒီအတွေးတစ်ခုအသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေး၏ကျောင်းများ။
တိုက်ရိုက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်စဉ်းစားအသုံးပွုသောအတွေး၏ 07.17 ကျောင်းများ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်အနာပျောက်စေသော။
07.18 Thoughts ရောဂါ၏အစေ့ဖြစ်ကြသည်။
ရောဂါ၏ 07.19 ရည်ရွယ်ချက်။ အစစ်အမှန်ရောဂါပျောက်ကင်း။ ရောဂါနှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကိုဖယ်ထုတ်ဆင်ခြင်၏ကျောင်းများအကြောင်း။
ရောဂါဆန့်ကျင်စဉ်းစား 07.20 ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုအခြားနည်းလမ်း။ ငွေပေးချေမှုမှမနှင့်သင်ယူမှုကိုမခံမလွတ်မြောက်ရှိပါသည်။
07.23 တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်။ ညှို့။ ၎င်း၏အန္တရာယ်များ။ အီလက်ထရွန်နစ်အကဂီတပြည်နယ်များ။ လက်ခံထားတဲ့အစွဲရှိနေစဉ်နာကျင်မှု့မရှိတဲ့ဒဏ်ရာ, ရက်စက်မှု။
07.24 ကိုယ်ပိုင် hypnosis ။ မေ့လျော့အသိပညာများပြန်လည်နာလန်ထူ။
07.25 ကိုယ်ပိုင်အကြံပြုချက်။ passive စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသုံးပြုခြင်း။ တစ်ဦးပုံသေနည်းများ၏ဥပမာများ။
အဆိုပါအရှေ့ပိုင်းလပ်ြရြားမြ 07.26 ။ အသိပညာ၏အရှေ့စံချိန်။ ရှေးဟောင်းအသိပညာ၏ယိုယွင်း။ အိန္ဒိယလေထု။
အဆိုပါအသက်ရှု 07.27 ။ အဘယ်အရာကိုအသက်တော်ပါဘူး။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်အသက်ရှူ။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှူ။ အဆိုပါ noetic အသက်ရှူ။ အဆိုပါလေးဆရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ရှူ။ Pranayama ။ ၎င်း၏အန္တရာယ်များ။
Patanjali ၏ system ကို 07.28 ။ ယောဂသူ့ရဲ့ရှစ်ထစ်။ ရှေးဟောငျးအီဂမှတ်ချက်အ။ မိမိအစနစ်၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ အချို့သော Sanskrit စကားများအတွင်းအဓိပ္ပာယ်ကို။ အရာများ၏ရှေးဟောင်းသင်ကြားမှုရှင်သန်နှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်အရာကိုအနောက်နိုင်ငံတွေလိုသည်။
အဆိုပါ Theosophical လပ်ြရြားမြ 07.29 ။ Theosophy ၏သွန်သင်။
နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းအတွက်လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏ 07.30 တိတ်။
ယင်းပြီးနောက်သေခြင်းတရားပြည်နယ်များအတွက် 07.31 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကံကြမ္မာကို။ ဘဝကနေဘဝမှတဆယ်နှစ်လုံးကိုအဆင့်ဆင့်၏ပတ်ပတ်လည်။ မရဏာနိုင်ငံနှင့်အမိုဃ်းကောင်းကင်ကို။
အခန်းကြီး 8 Noetic Destiny
ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကို၏ 08.01 အသိပညာ။ အဆိုပါ noetic ကမ္ဘာကြီးကို။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower ၏ self-အသိပညာ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သတိမိမိကိုယ်ကို၏အသိပညာလူ့ရရှိနိုင်ပါသည်အခါ။
အဆိုပါလေ့လာခြင်း၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှု 08.02 ။ အမျိုးသမီးပုံစံ Projection ။ သရုပ်ဖော်ပုံများ။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်သမိုင်း။
အဆိုပါထောက်လှမ်းရေး၏ 08.03 အလင်း။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower အတွက်အလင်း; အဆိုပါတွေးခေါ်ပြခြင်း, အဆိုပါပြုသော၌တည်၏။ သဘာဝသို့သွားပြီဟုသောအလင်း။
သဘာဝတွင် 08.04 အဆိုပါထောက်လှမ်းရေးလူသားတွေကနေလာပါတယ်။ အလင်းအဘို့အသဘာဝတရား၏ဆွဲ။ သဘာဝသို့အလင်း၏အရှုံး။
သဘာဝကနေအလင်း၏ 08.05 အလိုအလျောက်ပြန်လာ။ အဆိုပါ lunar ပိုး။ မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း။
Self-ထိန်းချုပ်မှုများကအလင်း၏ 08.06 ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။ လပိုး၏အရှုံး။ လပိုး၏ retention ။ အဆိုပါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပိုး။ ဘုရားသခငျ့သို့မဟုတ် "စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော" ဟုအဆိုပါဦးခေါင်း၌ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပွနျလညျ။ ဟိရံ Abiff ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏မူလအစ။
ထောက်လှမ်းရေးထံမှအလင်း၏ 08.07 သုံးဒီဂရီ။ အတှေးအသို့မဟုတ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲစဉ်းစား။ အဆိုပါပြုသော, အတွေးခေါ်, နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အတွင်း Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower များအတွက်အလောင်းများကို။
08.08 အခမဲ့အလိုတော်။ အခမဲ့အလိုတော်၏ပြဿနာ.
အခန်းကြီး9Re-ဖြစ်တည်မှု
09.01 recapitulation: လူသားတစ်ဦးဖြစ်လျက်ရှိ၏-Up လုပ်ပါ။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်။ အဆိုပါထောက်လှမ်းရေး၏အလင်း။ သဘာဝနှင့်ပြုသောအကြား link ကိုအဖြစ်တစ်ဦးကလူ့ခန္ဓာကိုယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏သေခြင်းသို့။ သေသောနောက်ထိုတာဘဲ။ re-တည်ရှိမှုပြုသော၏။
09.02 ယူနစ်လေးခုမျိုး။ ယူနစ်၏တိုးတက်မှု။
အမြဲတမ်းအတွက်၏ဘုံထဲမှာ Triune ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ဖို့ AIA ၏ 09.03 ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း။ စုံလင်သောခန္ဓာကိုယ်အတွက်၎င်း၏ပြုသော၏တာဝန်။ ခံစားချက်-and ဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစှ, ဒါမှမဟုတ် dual-ခန္ဓာကိုယ်။ စမ်းသပ်မှုများနှင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းပြည်ထောင်စုသို့ feeling- ဆောင်ခဲ့နှင့်အလိုဆန္ဒ၏စမ်းသပ်မှု။
09.04 အဆိုပါ "လူသား၏ကျဆုံးခြင်း" ဟုအဆိုပါပြုသောဆိုလိုသည်မှာ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်အပြောင်းအလဲများ။ အသေသတ်ခြင်းကို။ re-ဖြစ်တည်မှုအထီးတစ်ခုသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ။ ယခုမွကွေီးပျေါမှာကိုကျင့်သောသူသာလျှင်။ လူသား၏အလောင်းများကိုမှတဆင့်ယူနစ်များ၏စောင်ရေ။
09.05 စတုတ္ထယဉ်ကျေးမှု။ မြေကြီးတပြင်အပေါ်ယံလွှာအပေါ်အပြောင်းအလဲများ။ တပ်ဖွဲ့များ။ သတ္တုဓာတ်, အပင်နှင့်ပန်းပွင့်။ အဆိုပါမတူညီအမျိုးအစားများကိုလူ့အတှေးအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
09.06 စတုတ္ထယဉ်ကျေးမှု။ အငယျဆုံးသောယဉ်ကျေးမှု။
09.07 စတုတ္ထယဉ်ကျေးမှု။ အစိုးရများ။ အဆိုပါထောက်လှမ်းရေး၏အလင်း၏ရှေးသှနျသငျ။ ဘာသာတရား။
ယခုမွကွေီးပျေါမှာ 09.08 အဆိုပါပြုသောတစ်ကြိုတင်မွကွေီးပျေါမှာအသက်အရွယ်ကနေရောက်လာတယ်။ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ပြုသော၏ပျက်ကွက်။ feeling- နှင့်အလိုဆန္ဒ၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။ အဆိုပါလေ့လာခြင်း၏စာလုံးပေါင်း။ Re-တည်ရှိခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်။
ဇာတိပကတိကိုယ်ခန္ဓာ၏ 09.09 အရေးပါမှု။ အလင်း၏ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏သေခြင်းသို့။ ယင်းယူနစ်၏လှည့်လည်။ တစ်ခန္ဓာကိုယ်မှယူနစ်သို့ပြန်သွားသည်။
အဆိုပါပြုသော-in-the-ခန္ဓာကိုယ် 09.10 ။ "ဗြဲ" ၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းအဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် Re-ဖြစ်တည်မှုအတွက်မှားယွင်းနေသည်။ သေသောနောက်ထိုပြုသောရှိရမည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝေမျှဘူး။ မည်သို့ကျင့်သောအဘို့ကိုပြန်လည်တည်ရှိဘို့ကိုထုတ်သည်။
သေမင်း၏ယခုအချိန်တွင်အကျဉ်းချုံးအကြံအစည် 09.11 ။ ဖြစ်ရပ်များကိုနောက်အသက်အဘို့, ထို့နောက်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဂန္ဂရိနိုင်ငံအတွက်မီးတောက်-Up ။ ယုဒလူတို့အကြောင်းကိုတစ်ခုခု။ ကလေးမွေးဖွားမှာဘုရားသခင်၏တံဆိပ်ခေါင်း။ မိသားစု။ အဆိုပါလိင်။ လိင်ပြောင်းလဲနေတဲ့၏အကြောင်းမရှိ။
09.12 ဒါ့အပြင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ကြင်နာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးရိုးအလိုက်ဘယ်လိုကန့်သတ်သည်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သာမန်အလုပ်အကိုင်။ ရောဂါများ။ အသက်တာ၌အကြီးဖြစ်ရပ်များ။ ဘယ်လိုကြမ္မာကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်တည်မှုများအကြားအချိန် 09.13 ။ ကောင်းကင်အလောင်းတွေအကြောင်း။ အချိန်။ အဘယ်ကြောင့်လူတွေသူတို့နထေိုငျသောအသက်သို့ fit ။
09.14 သေသောနောက်အရာအားလုံးကြမ္မာဖြစ်ပါတယ်။ တီထွင်သူ။ ဂန္ထဝင် Hellas ။ re-ဖြစ်တည်မှုလူမြိုးတစျမြိုးအုပ်စုများဖြစ်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆက်ခံ၏စင်တာများ။ ဂရိနိုင်ငံ, အီဂျစ်, အိန္ဒိယ။
အဆိုပါပြုသောတစျပိုငျးကို၏ 09.15 သင်တန်းမှတ်ဉာဏ်ပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါသော်လည်း။ အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်-စိတ်ထဲ။ ကျင့်-မှတ်ဉာဏ်။ Sense- မှတ်ဉာဏ်။ A ကောင်းဆုံးမှတ်ဉာဏ်။ သေသောနောက် memory ။
09.16 ကလူ့ယခင်တည်ရှိမအောက်မေ့ပါဘူးကံကောင်းဖြစ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်။ အဆိုပါပြုသော၏လေ့ကျင့်ရေး။ တစ်ဦးကလူ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့မိမိကိုမိမိ၏ထင်၏။ သတိဖြစ် of နှင့် as။ မိစ္ဆာ "ငါ" နှင့်၎င်း၏ထင်ယောင်ထင်မှား။
09.17 ကျင့်သောအဘို့ကိုရပ်တန့်၏-တည်ရှိပြန်လည်အခါ။ တစ်ဦးက "ရှုံးနိမ့်" ပြုသောရှိရမည်။ မြေကြီးတပြင်အပေါ်ယံလွှာအတွင်းရှိငရဲ။ အဆိုပါ lecherous ။ သေသောက်ကြူးတို့၏။ မူးယစ်ဆေး fiends ။ တစ်ဦး "ဆုံးရှုံးခဲ့ရ" ပြုသောပြည်နယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အသစ်ပြန်ထွက်။ ကျင့်သောသူသာလျှင်ပျက်ကွက်သည့်အတွက်အဆိုပါစမ်းသပ်မှု။
အခန်းကြီးရှေ့အများ၏ 09.18 အကျဉ်းချုပ်။ သတိတ Reality ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကမ္ဘာ၏အလယ်ဗဟိုအဖြစ်က Man ။ ယင်းယူနစ်များ၏စောင်ရေ။ အမြဲတမ်းအဖွဲ့အစည်းများ။ အတှေးအများ၏မှတ်တမ်းမှတ်ထားကြပါတယ်။ လူသား၏ကံကြမ္မာကိုအဆိုပါမိုဃ်းနေရာများ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးအတွေးဟန်ချက်ညီ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်၏သံသရာ။ အမှုအရာကိုတှေ့မွငျထားတဲ့အတွက်စွဲမက်ဖွယ်ရာ။ အာရုံ elementas တွေဟာဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်သဘာဝပုပြုသောရှာတတ်၏။ ထင်ယောင်ထင်မှား။ အသက်တာ၌မရှိမဖြစ်သောအရာတို့ကို။
အခန်းကြီး 10 ဘုရားနှင့်သူတို့၏ဘာသာတရား
10.01 ဘာသာတရား; သူတို့တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနေကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ်မှာ။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘုရားသခင်၌ယုံကြည်ချက်။ ဘာသာတရားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ရမည်ဖြစ်သည်ပြဿနာများ။ မဆိုဘာသာတရားကိုအဘယ်သူအားမျှထက် သာ. ကောင်း၏။
ကိုးကွယ်ရာ၏ 10.02 Classes ရဲ့။ ဘာသာတရားများ၏ကိုးကွယ်ရာ; ဘယ်လိုသူတို့ဖြစ်တည်မှုသို့ဝင်ကြလော့။ သူတို့သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကြာရှည်။ တစ်သညျဘုရားသခငျ၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန်။ တစ်သညျဘုရားသခငျ၏အပြောင်းအလဲများ။ တပါးသောဘုရားတို့လူသားတွေဖန်တီးသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်သောရှိသာအဘယျသို့ရှိသည်။ တစ်သညျဘုရားသခငျ၏နာမကို။ ခရစ်ယာန်ဘုရား။
တစ်သညျဘုရားသခငျ၏လူ့အရည်အသွေးတွေ 10.03 ။ တစ်ဦးဘုရားသခင်ကိုသိသောဥာဏ်။ မိမိအတ္ထုများနှင့်အကျိုးစီးပွား။ တစ်သညျဘုရားသခငျ၏ဆက်ဆံရေး။ အဆိုပါကိုယ်ကျင့်တရားကုဒ်။ မြှောက်။ ဘယ်လိုကိုးကွယ်ရာသူတို့၏အာဏာကိုဆုံးရှုံး။ တစ်ဘုရားသခင်သည်မိမိအားဝတျပွုအဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်; သူကဘာလုပ်လို့မရပါဘူး။ အသေခံပြီးနောက်။ မယုံကြည်သောသူတို့။ ဆုတောင်းပဌနာ။
တစ်ဦးဘုရားသခင်၌တစ်ဦးယုံကြည်မှု 10.04 အကျိုးကျေးဇူးများ။ ဘုရားသခင်ကိုရှာ။ ဆုတောင်းပဌနာ။ အပြင်ဘက်တွင်သွန်သင်ချက်နှင့်အတွင်းစိတ်ဘဝ။ အတွင်းစိတ်သှနျသငျ။ သှနျသငျ၏တကျိပ်နှစ်ပါးသောအမျိုးအစားများ။ ဝါကိုးကှယျခွငျး။ ဟီးဘရူးအက္ခရာ။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ။ စိန့်ပေါလုသညျ။ ယေရှု၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်။ symbolic ဖြစ်ရပ်များ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို၎င်း, ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်။ ခရစ်ယာန်သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ။
သမ်မာကမျြးဆိုရိုးစကား၏ 10.05 အဓိပ္ပါယ်ရှင်းလင်းချက်။ အာဒံနဲ့ဧဝရဲ့ဇာတ်လမ်း။ အဆိုပါလေ့လာခြင်း၏စမ်းသပ်မှုများနှင့်စမ်းသပ်။ သေ "လူ။ ၏ကျဆုံးခြင်း" ။ စိန့်ပေါလုသညျ။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပွနျလညျ။ အဘယ်သူသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သညျယရှေုခဲ့သလဲ ယေရှု၏မစ်ရှင်။ ယရှေု, ယောက်ျားသည်တစ်ပုံစံ။ Melchisedec ၏အမိန့်။ ဗတ္တိဇံ။ အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, မူရင်းအပြစ်တရား။ သုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူ။ မဟာ Way ကိုထည့်သွင်းခြင်း။
အခန်းကြီး 11 မဟာ Way ကို
11.01 လူ၏အဆိုပါ "ဆင်းသက်လာ" ။ ပထမဦးဆုံး involution, မရှိဘဲဆင့်ကဲရှိပါသည်။ ပိုးဆဲလ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နက်နဲသောအရာကို။ လူ့များ၏အနာဂတ်။ the Great Way ကို။ ညီနောင်များ။ ရှေးဟောငျးအီဂ Mystery ။ Initiative ။ Alchemists ။ Rosicrucians ။
11.02 အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံ။ အဆိုပါသုံးလှနျးတငျ Way ကိုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီလမ်း၏သုံးခုလမ်းကြောင်း။ လ, နေရောင်ခြည်နှင့်အလင်းပိုးမွှား။ ဘုရားသခငျ့, "စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသော" ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း။ ပုံစံ, အသက်, ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လမ်း၏အလင်းလမ်းကြောင်း။
စဉ်းစားတွေးခေါ်၏ 11.03 အဆိုပါလမ်း။ တိုးတက်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ရိုးသားမှုနှင့်နျကနျကွောငျး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အဘိဥာဏ်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို။ ပွနျလညျ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အပြောင်းအလဲများ။
11.04 အဆိုပါ Way ကိုထည့်သွင်းခြင်း။ တစ်ဦးကအသက်တာသစ်ဖွင့်လှစ်။ ပုံစံ, အသက်, အလင်းလမ်းကြောင်းအပေါ်တိုးတက်လာ။ လ, နေရောင်ခြည်နှင့်အလင်းပိုးမွှား။ နှစ်ခုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်များအကြားတံတား။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနောက်ထပ်အပြောင်းအလဲများကို။ စုံလင်သော, သနေိုငျ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်။ အဆိုပါပြုသောများအတွက်သုံးအတွင်းစိတ်အလောင်းတွေ, အတွေးခေါ်, အ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏ knower, စုံလင်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အတွင်း။
မွကွေီးပျေါမှာအဆိုပါလမ်း 11.05 ။ အဆိုပါ ongoer ကမ္ဘာကြီးကိုထွက်ခွာမည်။ ပုံစံလမ်းကြောင်း: သူရှိကိုမြင်သောအရာကို။ သေလွန်သောသူတို့သည်၏အရိပ်။ ကျင့်သောသူသာလျှင်၏ "ပျောက်ဆုံးသွားသော" ဝေမျှ။ ရွေးချယ်မှု။
ဘဝလမ်းကြောင်းအပေါ် ongoer 11.06; အလင်းကိုလမ်းကြောင်းရက်နေ့တွင်မြေကြီး၌တည်၏။ သူဟာသူသည်သိတော်မူ၏။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှု။
အဆိုပါ Way ကိုအပေါ်သို့ရိုက်ထည့်ရန်မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်နေ 11.07 ။ ရိုးသားမှုနှင့်နျကနျကွောငျး။ အဆိုပါရုပ်ပျိုအသက်ရှူ။ စဉ်းစားတွေးခေါ်အတွက်လေးခုအဆင့်။
အခန်းကြီး 12 အဆိုပါပွိုင့်သို့မဟုတ်စက်ဝိုင်း
တစ်ဦးအတွေး၏ 12.01 ဖန်ဆင်းခြင်း။ တစ်အချက်အတွင်းတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်စဉ်းစား၏ Method ကို။ လူ့စဉ်းစားတွေးခေါ်။ ထောက်လှမ်းရေးပြုစဉ်းစား။ အတှေးအ, ဒါမှမဟုတ်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးမစဉ်းစားတွေးခေါ်။
သဘာဝပုံစံအတွက်စဉ်းစား၏ 12.02 Method ကို။ သဘာဝတရား၏ပုံစံများလူ့ Thoughts မှလာကြ၏။ pre-ဓာတုဗေဒ။
ကိစ္စများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ 12.03 ။ ယူနစ်။
12.04 မှားအချက်လေးတွေပေါ့။ ရှုထောင့်။ ကောင်းကင်အလောင်းများကို။ အချိန်။ Space ကို။
အခန်းကြီး 13 အဆိုပါစက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်ရာသီခွင်
13.01 ဂျီဩမေတြီသင်္ကေတ။ တကျိပ်နှစ်ပါး Nameless အမှတ်အတူစက်ဝိုင်း။ ယင်းရာသီခွင်သင်္ကေတ၏တန်ဖိုး။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ related အဆိုပါရာသီခွင် 13.03; အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်ခြင်းငှါ၎င်း, အဆိုပါထောက်လှမ်းရေးရန်။
သမိုင်းနှင့်ပရောဖက်ပြုစံချိန်အဖြစ်ရာသီခွင် 13.05; သဘာဝနှင့်အသိဉာဏ်-ဘက်မှာနှင့်အဆောက်အဦးများတွင်တစ်ဦးအတွေးထဲကတိုးတက်မှုတိုင်းတာရန်နာရီအဖြစ်။
ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာ၏ 13.06 အဖွဲ့များ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှလျှောက်လွှာ။
အခန်းကြီး 14 အတွေးအခေါ်: အသိပညာပေသေဖို့လမ်း
ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲစဉ်းစား၏ system ကို 14.01 ။ အဲဒါကိုသက်ဆိုင်ရာဘာအတူ။ ကစိုးရိမ်ပူပန်မဟုတ်ပါဘူးအဘယျသို့အတူ။ အဘယ်သူအဘို့ကတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်၏ဇာစ်မြစ်။ အဘယ်သူမျှမဆရာလိုအပ်ပါသည်။ ကန့်သတ်။ နားလည်သဘောပေါက်ခံရဖို့ပဏာမ။
14.02 recapitulation: လူ့ဖြစ်လျက်ရှိ၏လုပ်-Up ။ ယူနစ်။ အဆိုပါအာရုံ။ ထွက်သက်။ အသက်တော်-ပုံစံ။ အဆိုပါ AIA ။ လူ့အလောင်းတွေနဲ့ပြင်ပဝဠာကို။
14.03 recapitulation ဆက်ပြောသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပြုသောရှိရမည်။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်နှင့်၎င်း၏သုံးပိုင်း။ အဆိုပါပြုသော၏တဆယ်နှစ်လုံးကိုဝေမျှ။ ဘယ်လောက်ကြာလူသားတစ်ဦးမကျေနပ်ဖြစ်ပါတယ်။
14.04 recapitulation ဆက်ပြောသည်။ ခံစားချက်အဖြစ်နှင့်အလိုဆန္ဒအတိုင်းတာဘဲ။ အဆိုပါပြုသော၏တဆယ်နှစ်လုံးကိုဝေမျှ။ အဆိုပါအဘိဥာဏ်လေထု။
14.05 recapitulation ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်များ၏တွေးခေါ်။ အဆိုပါပြုသော၏သုံးစိတ်ထဲတွင်။ အဆိုပါတွေးခေါ်နှင့် knower ၏စိတ်ထဲတွင်။ ဘယ်လိုအလိုဆန္ဒအခွင့်အရေးအရပျ၌ပြောတတ်; အဆိုပါပြောင်းပြန်လှည့်လည်။ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေထု။
14.06 recapitulation ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ Triune ကိုယ်ပိုင်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ကျွန်မ-သမီး၏ knower ။ အဆိုပါ noetic လေထု။ အဘယ်အရာကိုလူသားတစ်ဦးသတိဖြစ်ပါသည် as။ ခံစားချက်၏အထီးကျန်; အလိုဆန္ဒ၏။ သိစိတ်ကိုမသိဖြစ်ခြင်း။
အတွေးအခေါ်၏ 14.07 အဆိုပါစနစ်။ ဒါဘာလဲ။ အသိပညာပေသေဖို့လမ်း: အပေါ်အဆင့်ဆင့်။